LY C – Cele Seven
Author: LY C
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၿပ ေခါင္းကိုင္မိခင္ႀကီးႏွစ္ဦး” ဆိုၿပီး စေနာက္က်ီစယ္ေနတဲ့အေပၚ ပရိသတ္ေတြကို ေမးခြန္းျပန္ထုတ္လိုက္တဲ့ ဆုထက္လွိုင္…….
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပွဲပြိုင်ဇာတ်ရှိန်တွေမြင့် လာတဲ့ ဇာတ်တွဲလေး ကတော့ လက်ရှိပြသနေတဲ့“ဒေါင်းယာဉ်ပျံဘုံနံဘေးမှာစာရေးလို့ထားချင်တယ်” ဖြစ်ပါတယ်။.ဒီဇာတ်လမ်းတွေဟာ ပရိတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိက ဇာတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကျော်ထက်ဇော် ၊ ဆုထက်လှိုင်၊ နန်းစန္ဒာလှထွန်းဟာ ပရိတ်သတ်အားရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ …
July 1, 2022 By LY C Celebrity
မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း နဲ႔ စာေတြ ပို႔ေနတဲ့သူေတြကို ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့ ႏြယ္နီ……
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် နွယ်နီကတော့ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ပို့ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်နွယ်နီ ကတော့ လက်ရှိမှာတော့ live sale တွေရောင်းချပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ မနွယ်နီက viber ကနေ ညစ်ညမ်းပုံတွေပို့ပြီး လာကြောင်နေတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိပြန်ပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ …
သူမ ရဲ့ ခ်စ္သူေလး ကို တရားဝင္ ထုတ္ျပလာၿပီး ေစ်းဗန္းသိမ္း လိုက္ၿပီလို႔ စေနာက္လိုက္တဲ့ မိတ္ကပ္ ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း)…….
ပရိသတ်ကြီးရေ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) ကတော့ အလှဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှု ကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ က သုသု လို့ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ ညီညီမောင် ကတော့ ပျော်ပျော် နေ …
မဂၤလာလက္မွတ္ ထိုးပြဲေလးကို ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပနိုင္ခဲ့လို႔ဝမ္းသာေၾကာင္းပုံေလးေတြနဲ႔ အတူတင္ေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စုလင္းရွိန္…..
ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်စုလင်းရှိန် ကတော့ MRTV ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ လူသိများလာပြီး အနုပညာ နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မှုနေရာတခုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ စေတလုံးမောင်ဘုန်း ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ စုလင်းရှိန်က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုလင်းရှိန်ကတော့ တပ်မတော် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲကို တတ်ရောက်ခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန် …
ရာသီအကူးအေျပာင္းကာလေၾကာင့္ ကေလးေတြအုပ္စုလိုက္ေနမေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံေျပာျပလာတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ……..
ပရဟိတမင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေဟာဆိုရင် စွန့်ပစ်ခံ ရင်သွေးငယ်လေးများ ကို မိဘအရင်း တစ်ယောက်ကဲ့သို့ လက်ခံ ပေးနေတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများ ဂေဟာမှ ကလေးငယ်လေးတွေ ဟာအချင်းချင်း စောင့်ရှောက် တတ်ကြပြီး ရိုင်းပင်းကူညီတတ်ကြတဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ …
June 30, 2022 By LY C Celebrity
အားလပ္ခ်ိန္ေလးမွာ ဝါသနာပါရာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီဆြဲေနတဲ့ ပိုင္တံခြန္ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္…..
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ ပိုင်တံခွန် ကတော့ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသားချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောက ကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်က အခုဆိုရင် ရုံတင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာပါ မင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးနိုင်သည်ထိကို အောင်မြင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
မီးထဲပါသြားတဲ့မိသားစုပိုင္ Mercury စားေသာက္ဆိုင္ေလးကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရွာတဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္….
ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာ ဆိုရင် လှပခန့်ညားလှတဲ့ ကောက်ကြောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုတွေ တခဲနက် ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္က ာမင်းမောင်က အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဝေးတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးကို ရောက်ရှိနေခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူက တိုင်းတစ်ပါးမှာ ရှိနေပေမယ့် ဥက္ကာမင်းမောင်ရဲ့ …
ဆရာေတာ္အရွင္သီရိ စႏၵသူရိယအား ဆြမ္းနဲ႔ သကၤန္းတို႔ကိုအသက္ (၄၁)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ေမြးေန႔ေလးမွာလႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ညီညီေမာင္(စမ္းေခ်ာင္း)
ပရိသတ်ကြီးရေ မိတ်ကပ်လောကမှာ နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်လှတဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)ကိုတော့ ပရိသတ်တွေရင်နှီးချစ်ခင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ သုသုကတော့ ပျော်ပျော် နေတတ်ပြီး ဟာသဉာဏ်လည်းရွှင်လှတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။ ဒီနေ့ ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ သုသု့ရဲ့ …
လြမ္းတယ္ေမေမ ညေတြ အေမရွိရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အရမ္းပဲအေမကို သတိရေနတဲ့ေမပန္းခ်ီ….
ရိုးသားပွင့်လင်းလွန်းတဲ့ အပြုအမူ ဟန်ပန် ၊ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး လှပတဲ့ မျက်နှာ ၊ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ စိတ်အာရုံ ကို ညှို့ယူထားသူကတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြရတဲ့ မင်းသမီးချော …
ခြဲစိပ္ကုသမႈခံယူရန္ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ အကယ္ဒမီ ခ်ိဳျပဳံ
ပရ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက မှာ ပါးချိုင့်ချိုချို အပြုံးချိုချိုလေး နဲ့ သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကြီး အကယ်ဒမီ ချိုပြုံးကိုတော့ ပရိသတ်တိုင်းသိမှာပါ ။ သရုပ်ဆောင်ကောင်း လွန်း တဲ့ သူမဟာ အဖြူအမဲရုပ်ရှင် ခေတ်ထဲက အောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့တာ …
© Cele Seven 2022 Cele Seven2022 • Themaga powered by WordPress